China 800KW Solid state high frequency welder - dual function Pipe welding machine set ifektri abakhiqizi | Mingshuo
I-800KW Solid state high frequency welder - umsebenzi ombaxa womshini wokushisela ipayipi
Umshini wokufaka imvamisa oqinile wombuso oqinile usebenzisa inkampani ye-IXYS yaseJalimane i-IXFN38N100Q2 38A / 1000V i-MOSFET enamandla amakhulu kanye ne-DSEI 2 × 61-12B 60A / 1200V yokutakula ngokushesha i-diode ukwenza uchungechunge lwe-inverter circuit.
Ukukhiqizwa Ukwethulwa komshini wokuxhumana we-contact / Induction
Umshini wokufaka imvamisa oqinile wombuso oqinile usebenzisa inkampani ye-IXYS yaseJalimane i-IXFN38N100Q2 38A / 1000V i-MOSFET enamandla amakhulu kanye ne-DSEI 2 × 61-12B 60A / 1200V yokutakula ngokushesha i-diode ukwenza uchungechunge lwe-inverter circuit. Idivayisi ye-inverter ifakwe ngendlela ye-bolt crimping, ehlukile kohlobo olufanayo. Indlela yokushisela ibhodi lesifunda yedivayisi ye-inverter yomshini wokushisela wesimo esiqinile esimweni esiphakeme.
Isilinganiso Voltage 450V
Isilinganiso Samanje 2000A
Uhla olunconyiwe lwamapayipi angafakwa nge-800kw HF SOLID STATE PIPE WELDER
Ipayipi ububanzi 114-273 mm
Amapayipi odonga obukhulu 4.0-10.0mm
Imodi Yokushisela Imininingwane / uhlobo olubili lomshini we-High Frequency Solid State Welding
Ububanzi Bohlelo Lokusebenza
Ukushisela insimbi yensimbi, ishubhu lensimbi engagqwali, ishubhu le-aluminium, ithubhu yethusi, i-H-beam kanye neshubhu yesigaba esikhethekile.
Umsebenzi Wokwakheka kokushisela okuhlukile kwengalo yokuvama okuqinile
Isimo se-solid solid frequency welder sisetshenziswa kakhulu kumugqa ophakeme oqondile weshubhu lesigayo. Ukunikezwa kwamandla okuvama okuphezulu kuthola ukwakheka okuguquguqukayo kwe-AC-DC-AC. Isilungisi sisebenzisa i-3-phase 6-pulse thyristor ukulungisa, ukulungisa i-IGBT DC noma isigaba sesithathu se-12-pulse thyristor ukulungisa. Inverter isebenzisa amandla aphezulu amandla amakhulu we-MOSFET ukwakha inverter egcwele i-resonant inverter. Ukukhishwa kwe-inverter isebenzisa i-transformer esebenza kahle kakhulu ye-ferrite ukufeza ukuhlanganiswa kwamandla, ukufaniswa kwe-impedance nokuhlukaniswa kukagesi. Resonant tank circuit isebenzisa i-resonance yochungechunge lwesibili.
Yonke imishini yokusetha yakhiwa ngamakhabethe wokulungisa igiya, ikhabethe lokukhipha i-inverter, uhlelo lokupholisa amanzi athambile, ikhonsoli netafula lokubeka.
Langaphambilini Uxhumano lwe-600KW Series Solid state high frequency welder China MOSFET Okuzenzakalelayo state solid hf induction heat welder
Olandelayo: I-200KW Ishubhu yensimbi engagqwali ye-Impeder yedivayisi yokushisela ye-Frequency High Frequency
Uhlobo lokuxhuma oluyi-100KW Series IGBT Luhlanganiswe Ngakho ...